Ama-Brewers enza i-Wort, Imvubelo Yenza Ubhiya-Izindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Ama-Brewers enza i-Wort, imvubelo yenza ubhiya
Ukupheka imali ngobuningi kuzoba ezobuchwepheshe nokungathetheleli, ngenkathi namuhla abenzi beziphuzo bethatha inselelo futhi besebenzisa amathangi abekwe ngokuvundlile, okuvame kakhulu ezindaweni zokuphuza utshwala zemikhiqizo emikhulu emhlabeni, ukugcina imvubelo yabo ijabule.
Amathangi akhanyayo avundlile / ithangi le-brite livame ukufakwa egumbini elinokuphakama okunganele. Ukonga isikhala esithile amathangi angafakwa kumazinga amaningi ukukhulisa inani lamathangi. Imvamisa ungayibona eYurophu ngenxa yezinkinga ezindala zokwakha nokuphakama.
Ukunambitheka okusobala kwezinhlobo zemvubelo yelager kusho ukuthi kuncane lapho kunamaphutha okucasha ngemuva, kanye nokushoda kwenqubo noma izithako zomenzi wobhiya kugqamile kulwanga.
Njengoba izitayela ze-lager zikhula ekuthandeni, abanye abapheki babheka inqubo evivinywe isikhathi ukusiza ukusheshisa ukukhiqizwa nokugcina imvubelo yabo ejabulisayo. Esikhundleni se-conditioning ebandayo emikhunjini yokuvutshelwa yensimbi engenasici engagqwali noma i- "unitanks", abakhiqizi baphendulela isigaba sokubambelela ngasohlangothini lwayo, ngokoqobo. I-tank yokubhangqa evundlile ithola ikhaya endaweni yokuphuza utshwala encane ezimele.
Qhafaza Lapha Ukuxhumana Nathi.
Previous: Inqubo Yokukhiqiza ye-oda eliya eJapan
Okulandelayo: Isimenywa saseJapan sizokwamukela izimpahla zamathangi kabhiya agqamile namathangi okubilisa